आफ्नै हात – जगन्नाथ – बाह्रथरी कुरा
आफ्नै हात – जगन्नाथ
शीर्षक देखेरै हजुरहरुले जिब्रो टोकिसक्नु भयो भने कृपया अगाडि नबढ्नुहोला । यदि हस्तमैथुनका बारेमा लेखेर १२-थरीले “चिप” थिम् रोज्यो भन्ने लाग्छ भने हामी के प्रष्ट पार्न चाहन्छौं भने हामी कुनै परिधिमा बाँधिएर लेख्न रुचाउँदैनौं । यो विषयमा लेखेर हामीले हाम्रो समाजमा व्याप्त यौनिकताको अनुपम प्रकार – हस्तमैथुनबारे गलत धारणाहरू भत्काउन मात्र खोजेका हौं ।
एकातिर यौनको बारे खुलेर कुरा गरौं भनेर सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैंया खर्च गर्ने, अर्कोतिर यति महत्वपूर्ण विषयमा १२ थरीको सत्प्रयासलाई धारे हात लाउने हो भने हामी राम राम मात्र भन्नेछौँ, काँध थाप्न जाने छैनौं । शुक्रबारे साप्ताहिक भन्ने पत्रिकामा खास केही हुन्न, त्यो १६ नं पेजमा हुने यौन जिज्ञासा र मध्य पृष्टको देखाउन देखाउन खोजे जस्तो, लुकाउन लुकाउन खोजे जस्तो फोटो बाहेक ! सबैको ध्याउन्न त्यो पत्रिका हातमा पर्ने बित्तिकै त्यही पेज पल्टाउने हुन्छ । तर अगाडि मान्छे हुन्जेल हिरो हिरोनी र राशिफल पढेर बस्ने, तर एकान्त हुने बित्तिकै हत्त न पत्त यौन जिज्ञासा र सुझाव पल्टाउने “छुपा रुस्तम” समाज हाम्रो वास्तविकता हो । त्यसैले आउनुहोस्, यो महत्वपूर्ण विषयमा समाजमा रहेका १२-२७ विचारहरूको पोस्टमार्टम गरौं ।
हस्तमैथुन युवाहरूले मात्र गर्छन्
गलत ! १२ थरी ब्यूरोको यौन बिटको अध्ययनले के देखाउँछ भने यो कार्य सर्वव्यापी छ । कुखुरे बैंशले छोएदेखि पातकी बुढेसकालसम्मका सबै मानिसहरू यो क्रियाकलापमा सरिक हुन्छन् । हो, कुनै उपाय नभएको अविवाहित हुँदा यसको प्रयोग धेरै भएपनि, श्रीमती माइत गएको बेला होस् या आफू फिल्ड गएको बेला – “हरपलको साथी” यही नै हो ।
हस्तमैथुन पुरुषहरूले मात्र गर्छन्
१२ थरीका स्त्री विशेषज्ञ भन्छन् , “पुरुषहरूको मात्र नैसर्गिक अधिकार भनेर यसलाई प्रचार गरिनु विडम्बना हो, किन भने यो कामार्य महिलाहरू पनि परापूर्वकाल देखि नै सरिक भएका हुन् । बरु को/कति भन्ने मात्र फरक हुन सक्ला, तर कसैले यो आत्मसन्तुष्टिको बाटो कहिल्यै हिंड्दैन भन्नु “वीरबलले कहिल्यै पाद्दैन” भनेको जस्तो डंका मात्र हो । अब महिलाहरुले कसरी गर्छन् , कहिले गर्छन् जस्ता विस्तृत विवरण यहाँ चर्चा नगरौँ, तर आत्मनिर्भरता सबैको लागि प्रिय वस्तु हो ।
हस्तमैथुनले नपुंसक बनाउँछ
नपुंशक भनेको के हो भन्ने कुरामा नै दुईमत छ हाम्रो समाजमा । यौन दुर्बलता हो कि सन्तान प्राप्ति हुन सक्ने गरी शुक्रकीट नहुनु नपुंशकता हो ? जे सुकै होस् , हस्तमैथुनले दुबै गर्दैन । हेर्नुस, लगातार हस्तमैथुन गरेर थाकेको बेला यौन ईच्छा त घट्छ नै र धेरै पटकको स्खलनले केही समयको लागी शुक्रकीटको सँख्या घटे जस्तो हुने हो । त्यसैले त बिर्य जचाँउन जाँदा ४८ घण्टा स्खलन नगरिकन आइज भन्छन् डाक्टरहरू, किन भन्दा शरीरले आवश्यक र क्षमता अनुसारको बिर्य उत्पादन र शुक्रकिट उत्पादनमा लाग्ने समय हो। अब बिर्य र शुक्रकिटको फरक के हो भनेर मनमा आइरहेको छ भने गुगल गर्नुस् !
हस्तमैथुनले लिङ्ग टेढो बनाउँछ
Lamarck’s Use and Disuse Theory अनुसार जुन कुरो जति धेरै प्रयोग भयो, त्यो त्यति नै बलियो र परिष्कृत हुन्छ । हुन पनि घन ठोक्ने मजदुरका पाखुरा र अरट्ठको ज्यान र पुरेत्याइँ गर्ने बाजेको भँगेरे ज्यान हेरे पुग्छ । अब युवावस्थामै घरजम गरेकाहरुले पनि हतियार ताला लगाएर त पक्कै राख्दैनन होला । अनि यौन सम्पर्क गर्दा लिङ्ग टेढो नहुने, हस्त मैथुन गर्दा टेढो हुने कसरी हुन सक्छ ? हो, धेरै जनाको लिङ्ग टेडो हुन्छ रे, तर बिग्रियो के ? भन्छन् नि, ‘टेढा है, पर मेरा है’ 😀
१ थोपा विर्य बन्न १०० थोपा रगत चाहिन्छ
ल छाड्नुस् यस्ता तर्क, अनि घाममा सुकाइदिनुस, घाँस जसरी । फुटपाथे रसरंग, अभिसारीका र यस्तै किसिमका पत्रिकामा भर पर्ने जमात चैं अझै पनि यही गलत धारणामा बाँच्छन् भने मलाई भन्नु केही छैन । यदि यो रेट सहि हुन्त्यो भने त १६-१७ बर्षको भर्भराउँदो जवानीमा बिहे गरेर दिनैक यौनकार्यमा सक्रिय हुने पुरुषहरु त रक्तअल्पता भएर चुसेको कागती जस्तो हुन पर्ने । रगत बनाउँछ हड्डी भित्रको मासीले – विर्य बनाउँछ अन्डकोशले । कता आग्रा, कता गाग्रा ।
हस्तमैथुनले आँखाको पावर घटाउँछ
हरे….. कसरी सम्झाउनु हो, यस्ता झ्यास तर्क दिनेहरूलाई ? अचेल त बच्चाहरू २-३ कक्षामा पढ्दा पढ्दै चस्माको भर पर्न थालिसकेका हुन्छन् ! के उनीहरू हस्तमैथुन गर्छन् त ? यदि आँखाको पावर घट्नमा हस्तमैथुन नै सर्वेसर्वा कारक तत्व भए भिटामिन ए खाएर रतन्धो हुनबाट बचौं, मोतिबिन्दुको उपचार गरौं भन्नेको सट्टामा हस्तमैथुन नगरेर आँखाको पावर बचाउँ भन्ने खालका विज्ञापन बज्थे होलान् नि रेडियोबाट ।
हस्तमैथुनले मनोरोगी बनाउँछ – हत्केलामा रौँ पलाउँछ
हस्तमैथुनले मनोरोगी बनाउँछ भनेर कतै प्रमाणित भएको हैन – कसैले हस्तमैथुन गरेर बौलाएको देखेको छैन – त्यही पनि समाजमा यस्ता कुरा सुनिन्छन् कहिले काहीं । हुन त सुन्तलाको बियाँ निल्यो भने पटमा सुन्तलाको बोट उम्रिन्छ, कानबाट हाँगा निस्किन्छ भन्थे 😀
हस्तमैथुन गर्नु यौन विकृति हो
नितान्त आफ्ना अंग प्रत्यङ्गको प्रयोग गरेर आत्मसन्तुष्टि लिनु कसरी विकृति हुन सक्छ ? कसैको पैसा चोर्न जान लागेको हो र, वा कसैलाई जबर्जस्ती यौन हिंसा गरेको हो र, वा कसैलाई बलजफ्ति गरेको हो र ? बरु घर परिवारमा सबै जना गफ गरेर बसिरहेको बेलामा यसरी घोसे मुन्टो लाएर मोबाइल चलाउनु मनोविकृति हो… ल बन्द गर्नुस आआफ्ना भाँडा । 🙂